Nika isandla | Ecobricks.org
Nika amandla Amandla Wakho Okuhle Ukuya Global Plastic Transition Movement
Khetha indlela yokukhuthaza umsebenzi we-Global Ecobrick Alliance's Work
Thenga ama-Brikcoins futhi usekele ngokuqondile ukususwa kwepulasitiki emvelweni
Buka i-GEA Intention Map
Bheka izimiso uMhlaba wethu owenza ngayo umhlaba futhi usebenzise izimali
Konke okuqukethwe kwethu kungu-100% mahhala, umthombo ovulekile, ngokuxhaswa kwebhizinisi noma ibhizinisi. Sinikeza umsebenzi wethu emhlabeni … futhi sikunikeza ithuba lokunikela amandla akho ekusebenzeni komsebenzi wethu.
I-Global Ecobrick Alliance yiyona engeyona inzuzo, i-Earth Enterprise ngemuva kwe-Ecobricks.org ne-GoBrik. Sifikile ukusekela ingqalasizinda yomqondo nezobuchwepheshe ngemuva kokunyakaza kwe-ecobrick emhlabeni jikelele. Sizimisele ngokuziqhenya ukugcina zonke izinsiza zethu mahhala futhi kufinyeleleke ukusiza abantu emhlabeni jikelele bajoyine ushintsho kusuka epulasitiki. I-Ecobricks.org nazo zonke izinsizakalo zethu ezesabekayo zibonakaliswa ngokugcwele ngokubambisana kwezinto nezinto zezimali. Sisebenza ngaphansi kokungabonakali kuka-100%. I-BrikCoin yethu yokuthengiselana, ibhalansi yethu nokuthi lokho noma bonke abasebenzisi bethu bangabonakala lapha. Izimali zethu nezindleko zethu zezezimali zizobonakala ohlelweni lwethu olusha lokubalwa kwezindlu (ukuqala ngo-Agasti 2018). Futhi uhlelo lwethu lokusebenza luyatholakala kunoma ubani ongayibona. Ingabe omunye umsebenzi wethu usize? Ungathanda ukufaka isandla ekususeni kweplastiki kusuka ku-biosphere? Ingabe wabelana ngombono wethu wendlu, imiphakathi kanye nezinkampani ezishintsha kusuka epulasitiki? Sizobonga amandla akho, isikhuthazo kanye nemali ukuze usize ukwenza izinto zethu zibe nzima kakhulu futhi kufinyeleleke.
Ngesinye isikhathi umnikelo
Ngesinye isikhathi iminikelo yamukelekile kakhulu. Sicela ugcine engqondweni ukuthi sithola kuphela iminikelo yomuntu evela kubantu bangempela. Amabhizinisi namabhizinisi, ungakwazi ukucela izinsizakalo zethu zokuqeqesha, kodwa akukho mnikelo. Iminikelo ye-paypal:
Our Bitcoin Wallet address:
3.14 Ukubhalisa kwe-patron
Sigcina iseva yethu ne-sofware isebenza ngesisekelo senani lezinkokhelo zenyanga zonke ezingu-3.14 $ ezivela kubathintekeli bethu. Bhalisela i-akhawunti ye-πPatron ngezansi:
Khetha Isikhuthazo Sakho
Ama-Ecobricks agcina iplastiki ne-C02 ngaphandle kwe-biosphere, ukukhulisa ulwazi lwezinto eziphilayo kanye … ngaphezulu! Funda kabanzi
Joyina ama-heroes okuguqula ama-trash emhlabeni jikelele ekhanda ipulasitiki yawo. Ukuphela kokungcola kuyabonakala! Uma sonke siyizidakamizwa ze-zero, ngeke kube khona nangokwesokunxele kwe-plastic ukungcolisa.